Computer Systems – Tagged "Warehouse" – ICT.com.mm
A4Tech FStyler Optical USB Wired Mouse FM10 (Gray)K11,601
LIVA Z3E Plus 256G Mini PC Black (i7-10710U-8G)K930,051
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Black (i7-10710U-4G)K877,801
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Silver (i7-10510U-4G)K820,326
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Black (i7-10510U-4G)K820,326
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: FM10 Sensor: Optical Type: Wired Ergonomic Design: Symmetric Resolution: 600-1000-1600 DPI Buttons No.:4Dimension: 108 × 64 × 35 mm Weight: 110 g Port: USB...
LIVA Z3E Plus 256G Mini PC Black (i7-10710U-8G)
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Silver (i7-10510U-4G)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ PLATFORM: Intel® Comet Lake-U Core™ i7-10510U SoC EXPANSION SLOT:2x COM (RS232) MEMORY:2 x SO-DIMM DDR4 2400 / 2666 MHz, up to 32GB STORAGE DEVICES:1 x M.2 2280...
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Black (i7-10510U-4G)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ PLATFORM: Intel® Comet Lake-U Core™ i3-10110U SoC EXPANSION SLOT:2x COM (RS232) MEMORY:2 x SO-DIMM DDR4 2400 / 2666 MHz, up to 32GB STORAGE DEVICES:1 x...
LIVA Z3E Plus 128G Mini PC Black (i3-10th Gen 4G)
LIVA Z3 Plus 128G Mini PC Silver (i3-10th Gen 4G)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LIVA Z3 Plus and Z3E Plus gear latest desktop-grade Intel® 10th Gen CoreTM processors, and feature evolutionary enhancement up to6cores on the performance. They support...
LIVA Z3 Plus 128G Mini PC Black (i3-10th Gen 4G)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Fully Customizable Optical Gaming Mouse EXOFRAME structure with highly customized key parts 16000 DPI Onboard memory for 10 Profiles MR05DCINBL001-0 From the look to the feel to...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Superior 16000 DPI for blisteringly fast performance 50M clicks using premium high-durability switches 11 programmable buttons MR05DCINBL000-0 R.A.T. 8+ Fully Adjustable Gaming Mouse The R.A.T.8+ provides gamers...
MAD CATZ The Authentic R.A.T. 4+ Gaming Mouse (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Highly Accurate Optical Sensor providing 7200 DPI performance Adjustable palm rest with super lightweight chassis7programmable buttons MR03MCINBL000-0 The R.A.T. 4+ is built uponalightweight...
MAD CATZ The Authentic R.A.T. 1+ Gaming Mouse (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Ultra Lightweight: only 60g Adjustable palm rest, adjusts to your preferred grip Super low friction PTFE feet for fast gliding action Non-slip side texture providesasteady...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Advanced textile-weave surface Anti-skid rubber base Anti-curling design for easy travel Liquid-resistant surface for easy cleaning Top Surface Materials: Smooth and low-friction cloth Base Materials: Odorless Silicon...
Anitech မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Wireless Touch Keyboard P503 (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ကီးဘုတ်တွေနဲ့မတူဘဲ Mouse အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Touchpad ပါဝင်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်တစ်လုံးရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ကီးခလုတ်ပေါင်း (၈၃) ခု ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသံအတိုး/အကျယ် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကီးခလုတ် (၃) ခု နဲ့ Function ကီးခလုတ် (၁၂) ခု...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Anitech အမှတ်တံဆိပ် GM702 Gaming Mouse (အဖြူရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Mouse Resolution – 1200 မှ 3200 DPI အထိ ပါရှိတဲ့အတွက် Game ကစားတဲ့အချိန်မှာ မိမိစိတ်ကြိုက် DPI ကို ရွေးချယ်နိုင်သလို အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း သင့်တော်တဲ့ DPI အနေအထားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Mouse...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Anitech အမှတ်တံဆိပ် GM301 Gaming Mouse (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Mouse Resolution – 2400 DPI ရှိတဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှု အတော်လေးမြန်ဆန်ပြီး Gaming Sensor ကောင်းမွန်တဲ့ Gaming Mouse တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mouse ကီးခလုတ်တွေကို အကြိမ်ရေ (၅)သန်းအထိ နှိပ်နိုင်တဲ့ ခလုတ်တွေနဲ့...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Color: Black Range: Up to 15 m Sensor Type: Optical Interface: Wireless Number of buttons:3A4Tech G3-310N Overivew Addatouch of sporty look to your...
Cooler Master Elite V3 230V 400W A/EU Cable Power Supply
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Active Power Factor Correction Higher Temperature Resistance Peak Power Tolerance > 80% Avg Efficiency 24P x 1, 4+4 Px1, PCI-ex1, SATA x 6, Peri x 3, Flpx...